Haryana vatsim-pianarana 2021/2022 Application Portal haryana.gov.in: Vaovao an-tsekoly amin'izao fotoana izao
Amin'ny maha mpianatra avy amin'ny fanjakana Haryana ny vatsim-pianarana Haryana 2021 eto ho anao. Fotoana fanabeazana maimaimpoana sy fanampiana ara-bola io. Ny vatsim-pianarana Haryana 2021 dia fotoana mety ho anao.
Aza adino ity fampahalalana manan-danja ity. Ny fanjakana Haryana dia nanome vatsim-pianarana betsaka. Mandrakotra ny fotoam-pianarana 2021/2022 izy ireo.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hamaky ianao:
Momba ny vatsim-pianarana Haryana.
Vatsim-pianarana Haryana 2021 sasany sy ny fomba fampiharana.
Ahoana ny fomba fangatahana vatsim-pianarana Haryana 2021 amin'ny Internet.
Momba ny Haryana Scholarship
Ny Haryana manam-pahaizana dia karazana vatsim-pianarana tsy manam-paharoa. Izy io dia nomen'ny departemanta misahana ny fifanampiana ao amin'ny Classes Castes & Backward. Ity vatana ity dia mampihatra drafitra isan-karazany. Ity tetik'asa ity dia ho an'ny fiahiana ara-tsosialy sy kilasy aoriana. Ho an'ireo ao amin'ny State of Haryana izany.
Ary koa, ny tena asan'ny departemanta dia ny mandrindra sy manara-maso ny asan'ny departemanta hafa. Ity fanaraha-maso ity dia miompana amin'ny resaka fampiharana ny drafitra isan-karazany. Skema namboarina ho an'ny fiahiana ara-tsosialy amin'ireo Castes voalahatra, kilasy mihemotra ary ireo foko misy anarana.
Vatsim-pianarana Haryana sasany 2021 sy ny fomba fampiharana
Zava-misy i Haryana Indigenes mahazo fidirana amina vatsim-pianarana marobe. Ity dia amin'ny alàlan'ny departemantan'ny kilasy Castes & Backward. Ary koa, amin'ny alàlan'ny andrim-panjakana hafa. Ny sasany amin'ireo vatsim-pianarana ho an'ny mpianatra Haryana dia ireto manaraka ireto:
Haryana Post Matric Scholarship ho an'ny mpianatra SC
Ity dia iray amin'ny vatsim-pianarana Haryana 2021. Ny vatsim-pianarana Haryana 2021 ho an'ny mpianatra SC dia azon'ny mpianatra ho avy. Ho an'ireo izay mianatra amin'ny kilasy post-matric.
Ny haben'ny vatsim-pianarana dia miovaova arakaraka ny Rs. 230 ka hatramin'ny Rs. 1,200 isam-bolana. Ary koa, ity dia ao amin'ny kilasy Post- Matric ka hatramin'ny Post-Graduate. Na izany aza, ity tetika ity dia misy mari-pahaizana momba ny fidiram-bolan'ny fianakaviana. Ny vola miditra amin'ny mpianatry ny mpianatra ST dia tsy tokony mihoatra ny R. 2.50 lakh isan-taona.
Mandritra izany fotoana izany, ny mpilatsaka hofidiana hangataka ny Haryana Post Matric Scholarship ho an'ny mpianatra SC dia manamarika. Miezaha foana hanamarina ireo daty fangatahana. Jereo ihany koa ny fizotran'ny fangatahana sy ny fampiharana.
Haryana Post Matric ho an'ny mpianatra OBC
Ity dia iray amin'ny vatsim-pianarana Haryana 2021. Ny vatsim-pianarana Haryana Post Matric ho an'ny mpianatra OBC dia azon'ny mpianatra avy amin'ny kilasy ambadika hafa. Ho an'ireo izay mianatra taranja post-matric ao amin'ny governemanta. Ity governemanta ity dia ao amin'ny Scheme momba ny Post Matric India. Na izany aza, ny mpilatsaka hofidina dia tokony ho fonenan'i Haryana.
Ary koa, io vatsim-pianarana io dia manomboka amin'ny Rs. 160 ka hatramin'ny Rs. 750 isam-bolana. ity dia ao amin'ny kilasy Post- Matric to Post-Grgraduate. Na izany aza, ity tetika ity dia misy mari-pahaizana momba ny fidiram-bolan'ny fianakaviana. Ny vola miditra amin'ny mpianatry ny mpianatra ST dia tsy tokony mihoatra ny R. 1 lakh isan-taona.
Ireo kandidà izay te-hangataka ny vatsim-pianarana Haryana Post Matric dia tokony hanamarika. Miezaha foana hanamarina ireo daty fangatahana. Jereo ihany koa ny fizotry ny fangatahana sy ny fampiharana.
Sarin-tsarimihetsika mitambatra ho an'ny Mpianatra an'ny SC, Haryana
Ity dia vatsim-pianarana Haryana hafa ho an'ny 2021. Ny governemanta Haryana no manome an'ity vatsim-pianarana ity. Azo ampiasain'ny mpianatra SC izy io. Na izany aza, mba hahafahanao mahazo an'ity vatsim-pianarana ity dia tsy maintsy manohy fampianarana bakalorea na bakalorea ianao. Tokony ho avy amin'ny oniversite eken'ny governemanta any Haryana io.
Ary koa, tsy maintsy manao fanatrehana farafahakeliny 60% ao an-dakilasy ianao. Ny vatsim-pianarana dia manome vola isam-bolana INR 1,000. Manome famatsiam-bola hividianana Boky INR 2,000. Ary koa, ny vanim-potoana fangatahana an'ity vatsim-pianarana ity dia eo anelanelan'ny volana Janoary ka hatramin'ny Febroary. Ho an'ny isan-taona izany.
Ankoatr'izay, tsy maintsy mangataka an-tserasera amin'ity vatsim-pianarana ity ianao. Tsidiho ny tranokala ofisialin'ny Departemantan'ny Fampianarana Ambony, Governemanta Haryana. Na izany aza, eo am-panaovana fampiharana dia hanome mari-pankasitrahana Caste ianao. Ary koa, mila manome mari-pankasitrahana domicile Haryana ianao. Ho fanampin'izay, hanomezanao taratasy fanamarinana tamin'ny fanadinana farany natao ianao.
Haryana NTSE ho an'ny mpianatra mpianatra 10 (mpianatra ho an'ny mpianatra)
Ity dia vatsim-pianarana Haryana hafa 2021. Ilaina ny manamarika izany. Ny Haryana NTSE dia fanadinana vatsim-pianarana ho an'ny mpianatra kilasy 10. Ny vatsim-pianarana NTSE (National Talent Search Examination) dia ao anatin'ny dingana roa. Ireo mpianatra izay mendrika amin'ny Haryana NTSE dia tsy maintsy mandray ny fanadinana NTSE Haavo 2. Ity fanadinana ity dia tantanan'ny NCERT.
Ary koa, ireo mpianatra izay mahazo vatsim-pianarana NTSE dia hahazo vatsim-pianarana 1,250 isam-bolana. Ho an'ny kilasy 11 sy 12. Ary koa, hahazo 2,000 R isam-bolana izy ireo. Ity dia ho an'ny taranja bakalorea sy bakalorea.
Ankoatr'izay, ny mpirotsaka hofidina hangataka amin'ny NTSE Haryana dia tsy maintsy manatona ny NTSE Haryana. Manaova fakan-kevitra tokony ho fantatra ihany koa:
Aiza no hahazoana taratasy fangatahana.
Ary koa, ho an'ny daty, ny fahazoana mikaona ary ny fizotry ny fampiharana.
Ny vatsim-pianarana NTSE dia misokatra ho an'ny mpianatra rehetra ao amin'ny sokajy. Anisan'izany ireo mpianatra amin'ny sokajy ankapobeny.
Haryana POSE Fianarana ho an'ny mpianatra BSc
Ity dia vatsim-pianarana Haryana iray hafa tamin'ny 2021. Ny filankevitra momba ny siansa sy ny haitao (HSCST) ao amin'ny Haryana dia manolotra ny vatsim-pianarana Pose. Ho an'ny B.Sc. ary M.Sc. mpianatra. Ny tanjon'ity vatsim-pianarana ity dia ny hampiroborobo ny fanabeazana siansa. Nomena ho an'ny mpianatra Haryana ny vatsim-pianarana Pose (Fampiroboroboana ny fampianarana siansa). Ho an'ireo izay misafidy taranja siantifika ifotony sy voajanahary. Ity dia amin'ireto taranja manaraka ireto:
3 taona B.Sc.
Ary koa, mandritra ny 4 taona B.Sc.
5 taona mifandray M.Sc./MS col
Ho fanampin'izay, mandritra ny 2 taona M.Sc.
Ireo mpianatra voafantina eo ambanin'ny vatsim-pianarana Pose dia hahazo vatsim-pianarana isam-bolana Rs. 4,000. Mandritra ny taona 1, 2 ary 3 ity. Ary koa, Rs. 6000 nandritra ny taona faha-4 sy faha-5.
Ankoatr'izay dia omena mpianatra 150 ny vatsim-pianarana Pose. Ireo mpifaninana te-hangataka vatsim-pianarana Pose dia tokony hanamarika. Miezaha hijery ny datin'ny fampiharana Pose. Jereo ihany koa ny fizotran'ny fangatahana sy ny fampiharana.
Haryana NMMS ho an'ny mpianatra mpianatra 8
Ity dia vatsim-pianarana Haryana hafa amin'ny 2021. Haryana NMMS dia vatsim-pianarana tohanan'ny ivon-toerana. Manome fanampiana ara-bola izany. Ity fanampiana ity dia ho an'ireo mpianatra mendrika amin'ny sehatra marefo ara-toekarena. Natao hanampiana azy ireo hanohy ny fianarany aorian'ny kilasy 8.
Aza hadino fa. Mpianatra avy any Haryana mianatra amin'ny kilasy faha-8 no afaka mangataka. Na izany aza, hisy fitsapana roa. Ireo dia ny fitsapana ny fahaizan'ny saina (MAT) ary ny Scholastic Aptitude Test (SAT).
Mpianatra voafidy amin'ny Haryana NMMS no hahazo ny vatsim-pianarana. Miankina amin'ny Rs io. 12,000 isan-taona (Rs. 1000 isam-bolana). Ankoatr'izay, ny mpilatsaka hofidiana dia tokony hanamarika. Hamarino tsara fa hanamarina ny datin'ny fangatahana ianao. Jereo ihany koa ny fizotry ny fangatahana sy ny fampiharana.
Programme Fellowship HSCST ho an'ny Ph.D. mpianatra
Ity dia vatsim-pianarana Haryana hafa 2021. Ny HSCST Scholarship Program dia fotoana mety. Tena toy izany ho an'ireo mpangataka maniry ny hanohy Ph.D. ao amin'ny Oniversite Haryana. HSCST (State Council for Science and Technology of the State of Haryana) dia manome loka fikarohana. Ireo fanomezana ireo dia ho an'ireo mpianatra nisafidy ny CSIR-JRF. Ary ireo koa dia natao ho an'ireo izay manana farafaharatsiny ny CSIR-LS NET.
Ny habetsaky ny vatsim-pianarana dia Rs 18,000 isam-bolana. Izany dia mandritra ny roa taona voalohany ho an'ny mpanampy amin'ny fikarohana. Ary Rs 21,000 isam-bolana, koa ho an'ny taona fahatelo sy ny taona manaraka. Mpianatra iray koa dia mahazo quota isan-taona amin'ny vola 20000 amin'ny oniversite.
Ahoana ny fomba fangatahana vatsim-pianarana Haryana 2021 amin'ny Internet
Ireo kandidà maniry ny hangataka ny vatsim-pianarana Haryana 2021 dia afaka mangataka an-tserasera. Azo atao ao amin'ny vavahady Haryana izany. Ny mpangataka dia tsy maintsy misoratra anarana amin'ny Internet ho an'ny Haryana Scholarship 2021. Ary koa fenoy ny antsipiriany fototra toy ny antsipirian'ny fampianarana.
Ary koa. ampidiro ny antontan-taratasy ary alefaso amin'ny Internet ny taratasy fangatahana hamenoana ny fizotran'ny fangatahana. Ny fe-potoana farany fangatahana an'ity vatsim-pianarana ity dia aseho amin'ny tranokala ofisialy. Ny vavahadin'ity vatsim-pianarana an-tserasera ity dia haryana.gov.in.
FAQ momba ny vatsim-pianarana Haryana 2021
Ireto misy sasany amin'ny FAQs nanontaniana momba ny vatsim-pianarana Haryana ho an'ny 2021:
1. Momba ny inona ny vatsim-pianarana Haryana?
Mikasika ny fanomezana fanampiana ara-bola sy fanampiana ho an'ny olom-pirenena Haryana io.
2. Iza ireo / ireo mpanohana an'ity vatsim-pianarana ity?
Ity vatsim-pianarana ity dia omen'ny departemanta misahana ny fifanampiana ao amin'ny Classes Castes & Backward Classes. Ary koa, nomen'ny governemanta fanjakana Haryana izany.
3. Firy ny vatsim-pianarana Haryana azo alaina amin'ny 2021?
Betsaka amin'izy ireo no misy. ny sasany amin'izy ireo dia:
Haryana Post Matric Scholarship ho an'ny mpianatra SC.
Ary koa, misy ny vatsim-pianarana Haryana Post Matric ho an'ny mpianatra OBC.
Haryana Pose vatsim-pianarana ho an'ny mpianatra BSc.
Ary koa, misy Haryana NMMS ho an'ny mpianatra kilasy 8.
Ankoatr'izay, misy ny HSCST Fellowship Program ho an'ny Ph.D. Mpianatra.
Ankoatr'izay, misy Haryana NTSE ho an'ny mpianatra kilasy 10 (mpianatra ankapobeny).
Scheme Stipend mitambatra ho an'ny mpianatra SC, Haryana.
Ankoatr'izay, misy ny vatsim-panjakan'ny fanjakana Haryana.
4. Misy olona afaka mangataka an-tserasera amin'ny vatsim-pianarana Haryana
5. Tahaka ny ahoana ny fomba fisoratana anarana amin'ny Internet?
Tsotra sy mora. Raha ny zava-misy dia mariho tsara. Ireo kandidà maniry ny hangataka ny vatsim-pianarana Haryana 2021 dia afaka mangataka an-tserasera. Azo atao ao amin'ny vavahady Haryana izany. Ny mpangataka dia tsy maintsy misoratra anarana amin'ny Internet ho an'ny Haryana Scholarship 2021.
Fenoy koa ny antsipiriany fototra toy ny antsipirian'ny fanabeazana. Ny vavahadin'ity vatsim-pianarana an-tserasera ity dia haryana.gov.in.
Raha fintinina dia fotoana tena mety ho an'ny olom-pirenena Haryana. Ary koa, fotoana iray mahafinaritra ho an'ny olom-pirenena Haryana izay mikasa ny hampandroso ny fianarany.
Ankoatr'izay, torohevitra fa raha liana amin'ireo vatsim-pianarana etsy ambony ianao dia manao fikarohana. Azonao atao ihany koa ny misoratra anarana / mizara ity fampahalalana ity amin'ny sehatra media sosialy. Mety hanampy olona mila izany ianao.
Cozym Process Systems Fanangonana voafetra 2020/2021 Application Form Portal
Lisitry ny fidirana andiany faha-2 an'ny Fed Poly Ilaro HND 2019/2020 dia mivoaka
Fanatanjahan-tena momba ny fanatanjahantena freshmen UNIKELY 2016/2017
Misorata anarana izao ho an'ny mpiasa misahana ny famokarana ao amin'ny Greenswealth Corporate Services Limited
Shield Financial consultant Recruitment 2017 ho an'ny Manager Manager
Famakafakana ny Rice (oryza spp.) Rafitra fanavaozana any atsimo atsinanan'i Nizeria
Torolàlana sy fomba fiasa momba ny fanamarinana FUAM Transcript sy Document
« 7 tsara indrindra te-hianatra any ivelany ho an'ny vatsim-pianarana 2021/2022 maimaim-poana
JAMB UTME Fisoratana anarana 2021 Jereo ny fomba fividianana form sy fampiharana »